အစောပိုင်းစာကြည့်တိုက်များမှာ သေသေချာချာလုပ်ဆောင်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း ထိုအယူအဆပေါ်မူတည်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အစောပိုင်းတွင် Paul Otlet and Henri La Fontaine တို့ပါဝင်ပြီး ၁၈၉၅ ခုနှစ်မှစတင်၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိပညာများကို စနစ်တကျစုဆောင်း၍ စီမံထိန်းသိမ်းထားမည်ဆိုပါက ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းမှုကို ယူဆောင်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ နည်းပညာအသစ်များကိုအသုံးပြု၍ ထိုအကြံညဏ်ကို အဆင့်မြှင့်ပေးခဲ့သူများမှာ Vannevar Bush နှင့် J.C.R. Licklider တို့ဖြစ်သည်။ Bush သည် သုတေသီဖြစ်ပြီး ဟီရိုရှီးမားတွင် ချခဲ့သော ဗုန်းပြုလုပ်ရာတွင် ကူညီပေးခဲ့သည်။ ထိုပျက်စီးမှုများကို တွေ့မြင်ပြီးနောက် နည်းပညာဖြင့် ဖျက်ဆီးမှုကိုလုပ်မည့်အစား အသိအမြင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် စက်တစ်ခုကို တီထွင်ချင်စိတ်ပေါ်လာသည်။ ခုံပေါ်တွင် စကရင် ၂ခု ပါဝင်ပြီး ဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သည့် ခလုတ်များ၊ စာရိုက်ရသည့်ကီးဘုတ်တစ်ခုပါဝင်သည်။ ထိုစက်ကို Memex ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။ ထိုနည်းလမ်းဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည့် စာအုပ်နှင့် ဖိုင်များကို လျင်မြန်စွာ ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် Ford Foundation မှ Licklider ကို နည်းပညာအသုံးပြု၍ စာကြည့်တိုက်များ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပြုလုပ်ရန်လေ့လာစမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ရန် ထောက်ပံ့ကူညီခဲ့သည်။ ဆယ်စုနှစ်ခန့်ကြာသော်အခါ သူ၏ "Libraries of the Future" စာအုပ်တွင် သူ့မျှော်မှန်းချက်ကို ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာများနှင့် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်သည့် စနစ်ကို တီထွင်လိုသည်။ သို့မှသာ လူတို့လိုအပ်ချက်နှင့် အကြံပေးချက်များကို စက်မှ အလိုအလျေျာက်အကြံညဏ်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်တွင် ၃ ပိုင်းပါဝင်သည်။ အသိညဏ်အစိတ်အပိုင်း၊ မေးခွန်း၊ အဖြေတို့ဖြစ်သည်။ ကြိုတင်သိမြင်တတ်သည့်စနစ် ဟုခေါ်ခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ်စာကြည့်တိုက်အများစုသည် တက္ကသိုလ်အဖွဲ့အစည်းရှိ စာအုပ်များ၊ စာတမ်းများ၊ သုတေသနစာတမ်းများနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံပြုလုပ်ထားပြီး ထားရှိသလို၊ မူလထဲက ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအချက်အလက်များကို ထားရှိသည်။ ထိုစုဆောင်းထိန်းသိမ်းမှုများကို အများပြည်သူများ လွတ်လပ်စွာရယူနိုင်ရန် အနည်းငယ်သောထိန်းချုပ်မှုများထားရှိပြီး ရယူခွင့်ပေးသည်။ အချို့ ငွေကြေးရယူသော သုတေသနဂျာနယ်များတွင်မူ ဖတ်ရှုနိုင်ခွင့်ကို အနည်းငယ်သာပေးထားသည်။ ရေပန်းစားသည့် open source များတွင် ။DSpace, EPrints, Digital Commons, and Fedora Commons-based systems Islandora and Samvera တို့ပါသည်
မူပိုင်ခွင့် နှင့် လိုင်စင်[ပြင်ဆင်ရန်]
အလိုအလျောက် အကြံညဏ်ပေးသည့် စနစ်[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ Stocker၊ Gerfried (1 January 2014)။ "Beyond Archives (or the Internet 100 years before the Internet)"။ Possible Futures: art, museums and digital archives (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ ISBN 9788575963548။ 30 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Actually it was 1895 when Paul Otlet together with Henry La Fontaine, who was later awareded the Nobel Peace Prize, startedaproject - Mundaneum - that was initiated and driven by their idea that, if they would be able to collect all human knowledge and make it accessible to everybody worldwide, then this would bring about peace on Earth. CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ Bourne၊ Charles P. (2003)။ A History of Online Information Services, 1963–1976 (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ MIT Press။ pp. 169–170။ ISBN 9780262261753။ 30 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ 1696 Milestone - DIALOG, with the ERIC database, provided the first instance of extensive availability of abstracts online for search output. CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ Besser၊ Howard (2004)။ "The Past, Present, and Future of Digital Libraries"။ A Companion to Digital Humanities (Englishဘာသာစကားဖြင့်)။ Blackwell Publishing Ltd။ pp. 557–575။ doi:10.1002/9780470999875.ch36။ ISBN 9781405103213။ 30 April 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ CS1 maint: အသိအမှတ်မပြုသော ဘာသာစကား (link)
↑ Fox, Edward A. (1999). "The Digital Libraries Initiative: Update and Discussion". Bulletin of the American Society for Information Science 26 (1). ISSN 2373-9223. Retrieved on 30 April 2018. Archived3April 2018 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒစ်ဂျစ်တယ်_စာကြည့်တိုက်&oldid=727714" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။